Ukuphuculwa kwesoftware yasimahla njengenjini yotshintsho -Geofumadas
Uphuhliso kwi-Software Software njengenjini yenguqu
NgoJulayi, 2015 Ukufundisa i-CAD / GIS, GvSIG
Phantse yonke into ilungele i-7as gvSIG iLatin America neCaribbean, eya kubanjelwa eMexico.
Sifumanisa kubalulekile ukongezwa ngokuthe ngcembe kwamaziko oluntu, athe ngonyaka alawulwa sisoftware yobunini, inkqubo kwiimeko ezininzi eziqale ekuphunyezweni kweeprojekthi zenkxaso-mali zamanye amazwe ezihlala zibotshelelwe kukusetyenziswa kweempawu ezithile. Ukutshintsha oku akukho lula, ukuba sibuthathela ingqalelo ubuthathaka kulawulo lukarhulumente malunga nengeniso yabasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nokuthontelana kobugqwetha, ngomnye umkhosi oqhubayo.
Inyaniso yokuba ezi ziganeko zihlelwe kwi-academy zixabiseke kakhulu, kule ngxaki iCandelo leJografi le-UAEM.
Umxholo,Ukuphuhliswa kwesoftware ekhululekile njengomqhubi weenguqu«, Ilungele imeko yeMesoamerican, isetyenziselwa ukuva igama elithi« uphuhliso »kwaye ikhumbula iinzame ezingaphumelelanga zokunyanzela izikimu ezingalungelelaniswanga ngokomxholo. Ukuhambisa imodeli ye-OpenSource njengenkuthazo yokubonelela ngendawo yokuhlangana yeengcali, abaphandi, abaphuhlisi, iingcali kunye nabasebenzisi ngokubanzi, yinto enomdla kangangokuba kude kube ngoku akukho mntu ukhuthazayo ngale ndlela. Kulindeleke ukuba ulwamkelo lwasekhaya luthi chu luvelise ilaphu eligcina ukulingana phakathi kozinzo kunye "nenzuzo", ekungekho mntu woyikayo kwaye ngelishwa, iyimfuneko ukuze wonke umntu aphumelele.
Izihloko zingaphezulu kokutyeba kwaye ziluncedo kuwo wonke umxholo waseLatin American: iigridi zombane, iarcheology ekude, ukungqubana kwendlela, ukhuselo lwaseburhulumenteni, ukuxilongwa kolwaphulo-mthetho, ukwanda kwedolophu. Ngokuqinisekileyo umbutho we-gvSIG uyazi ukuba ubutyebi obuninzi buthatha umngcipheko wokwenza i-atom ngaphandle komsonto oqhelekileyo okhokela umzamo wobuchule kunye nenjongo yokwenza izisombululo zokusetyenziswa gwenxa, ngaphandle kokukhumbula ukuba iingxaki kulo mxholo ziphantse zafana.
Ukuxoxisana kulungile, kuyabhengeza, kuyafundisa. Kubonakala kubalulekile kuthi ukuba i-gvSIG ibonakala kwiimeko ezisetyenzisiweyo. Siphakamisa ukuba amandla angaphezulu kufuneka abekwe kwi-ax yokuhlengahlengisa amava kunye neenkqubo, sikhumbula ukuba kwezi ndawo isileyiti ecocekileyo yotshintsho kumaziko yenza iinzame ziphulukane nomphetho. Kananjalo ngenxa yokuba lisiko lesinyanya kula mihlaba ukuphinda ubuye amanzi afudumeleyo, ngamanye amaxesha ngenxa yokunqongophala kwenkqubo, abanye ngenxa yekratshi.
Iigeomatics zasimahla wonke umsindo, kwaye kulungile. Ngaphandle kwemimandla ye-geospatial, i-academy inabachwephesha abanokubheja kwisicwangciso esiliqili senxalenye yezobuchwephesha, ukuhambisa umsi womhlaba kwiintloko zabenzi bezigqibo abathatha isixhobo kwimigaqo-nkqubo yoluntu.
Ukuqeshwa ngu-Agasti 26, 27 no-28. Kuya kufuneka ukhawuleze kuba nangona kungenwa simahla, indawo incinci.
Ngoku ngoku ndiqhubela phambili amaphepha ahanjiswa kumagumbi amabini afanayo:
NgoLwesine i-27 ka-Agasti
Ukusetyenziswa kwe-gvSIG kwi-chemistry yokusingqongileyo: i-georeferencing ye-pollution iplanzi kwisigxina kunye nokuvavanywa kwesichengeni setyhefu somntu kunye nokusingqongileyo.
i-gvSIG ekuphunyezweni kwinqumlezo ye-cartographic ye-Mobile Application ye-National Knowledge Management Network kwi-Climate Change
Amaphupha e-coroplet kunye nekhono labo lokubonakaliswa kobudlelwane bezithuba
Ifowuni yesicelo kwiJava ngenjongo yolwazi lwengcaciso
Ukunqunywa kweZityalo ezinokuthi zibe nemifuno yeZityalo eziQoqosho eMexico. Isifundo seCandelo leNgqolowa yesikhashana (iTriticum aestivum L.), ngokusebenzisa i-gvSIG
Ukuphuhliswa kwesixhobo sokubala kwe-Astronomical Azimuth kwi-gvSIG
Isiphakamiso seendlela zokwenza uphuhliso lwentlupheko yolwazi lwendawo
Ukuhanjiswa komsebenzi wokupapashwa kweemveliso zemibala kwimimandla evulekile
Ukuchongwa kweesekethe ezimfutshane okanye ukufutshane nokuhambisa nokuthengiswa kwemveliso yezolimo. Isiphakamiso ngeprogram ekhululekile.
Inkqubo yoLwazi lweGaographic
UMasipala waseJesús María
Proubikla projekthi. Imephu, ukubonakala kweso sixhobo kunye nokukhuphela ithuluzi ngokusebenzisa
Ukumisela indawo kwindawo entsha yokuhambisa ngokufaka isicelo sokuhlalutya
kwendawo, usebenzisa i-gvSIG yolwazi lwenkqubo yolwazi kunye nolwimi lwe-Pyomo lwengqondo
gvNIX: Uphuhliso olukhawulezileyo lweendlela zokujonga kunye nokuphathwa kwedatha
gvSIG na Gestão kamasipala dos usos multiplas no Complexo Estuarino Lagunar. Ilha Comprida-Cananéia / São Paulo / Brazil
gvCity. Isisombululo sikaMasipala kunye nokuthatha inxaxheba koluntu nge software.
Ulawulo lweNdlela ngeendlela zeGvSIG
ULwesihlanu 28 ka-Agasti
Indawo yendawo efanelekileyo yokwakhiwa kwamanzi amanzi okungena kummandla wesentshona weSithili saseSithili
Iskripthi se-gvSIG malunga nokujoliswa kwezobugebengu belizwe ngokusekelwe kwi-algorithm ye-crimino
Ukulinganiswa kweendleko ezichanekileyo zokulimala ngeendleko umkhukula
indawo zezindlu kaRhulumente waseMexico
Ubume be-automaton yeselula ukumelelwa kwendawo yasezidolophini eCuliacán, eSinaloa. EMexico
Ukuyila kunye nokuphunyezwa kweqonga lokuxhasa lawulo lommandla ukungena ngaphakathi kwiCONAFOR
Iprototype kwiPython yokufanisa i-geospatial data
Ukuyila kunye nokuphunyezwa kweZiseko zoLwazi lweSithuba njengeSiseko seMiboniso
UkusiNgqongileyo nokuThuthukiswa komhlaba
Ukuhlanganiswa nokuphunyezwa kwe-a I-Geoportal kwiMpilo (GEO-HEALTH) ngokusebenzisa isofthiwe yehhala kunye namathuba okusetyenziswa ngokusebenzisa i-gvSIG
Indlela yokubeka esweni ukwandiswa kwedolophini ehlabathini lonke
Ukuphuhlisa i-WEB SIG kwisofthiwe ye-free malunga ulwaphulo-mthetho
I-Bhenki kaZwelonke yeNgqesho: Umbono wendawo. Inkqubo yokwabiwa kwakhona komsebenzi wokuqala eMexico ngokusebenzisa i-Time Bank.
Idatha yeZithuba kwi-IUCN iMesoamerica
Usoção do gvSIG em Projetos de Defesa No
Ukusetyenziswa kwe-GIS ekufundeni zendlela. Jujuy, Argentina
Ukufunda ngokubambisana kunye nemfundo ethandwayo kwi
Isizukulwana seefayile zeMapfile (.map) ekudalweni kwezicelo ngeMapServer ngokusebenzisa inkxaso ye-gvSIG
Ukujonga Archaeological ekude EMexico: Iimeko zeSeñorío de Palenque ne-El Tajín
Lawulo lwe zombane amanethiwekhi kunye nokubambisana kombane wegvSIG Tio Pujio
Ukuze siqaphele, sincoma ukulandela iphepha le Umbutho weGvSIG
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukuphunyuka kukaChapo Guzmán, umsebenzi wobunjineli obuphezulu
Post Next IRejista kunye neCadastre kumxholo weNkqubo yoTshintsho kaZwelonkeOkulandelayo »
Ukuphendula ku "UkuPhuculo kweSoftware yasimahla njengenjini yotshintsho"
Ukulungiswa okuncinci. Ikomkhulu le nkomfa i-UAEM, kungekhona i-UNAM (nangona i-UNAM ingenye yemibutho exhasa umcimbi).
Siyabulela ukusasaza iintsuku!